Madaxweyne kala diray baarlamanka dalkiisa, shaqadana ka eryay raysal wasaarihiisa Isagoo ka Jawaabaya Codsiga Shacabka | Gaaroodi News
Madaxweyne kala diray baarlamanka dalkiisa, shaqadana ka eryay raysal wasaarihiisa Isagoo ka Jawaabaya Codsiga Shacabka
Dibadbaxayaasha magaalada Tunis
Madaxweynaha Tunisia ayaa shaqada ka ceyriyay ra’isul wasaaraha, isla markaana kala diray baarlamaanka, kadib mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhacay guud ahaan wadanka.
Kumannaan kun oo mudaaharaadayaal ah, oo ka careysan qaabka khaldan ee dowladda u maamushay xanuunka ‘Covid-19’, ayaa soo buux dhaafiyay waddooyinka waxayna isku dhaceen booliska.
Madaxweyne Kais Saied ayaa ku dhawaaqay inuu la wareegayo xilka isagoo gacan ka helaya ra’iisul wasaare cusub, waxa uu sheegay inuu damacsan yahay inuu dejiyo xaaladda dalka oo uu dib usoo celiyo xasiloonida iyo kala dambeynta.
Balse dadka ka soo horjeedaa waxay ku tilmaameen talaabadiisa inay inqilaab tahay.
“Waxaan qaadanay go’aannadan … illaa inta nabadda ay ku soo noqoneyso Tuunisia iyo in aan badbaadinno dowladda,” ayuu Mr Saied ku yiri khudbad telefishanka laga sii daayay ka dib kulan deg deg ah oo amniga looga hadlay oo ka dhacay qasrigiisa.
Gelinkii dambe ee habeenkii Axadda, ka dib go’aanka madaxweynaha dibadbaxayaashu ayaa sameeyay dabbaal degyo ay ku taageerayaan warka ah in ra’isul wasaare Hichem Mechichi la ceyriyay.
Kumannaan kun oo qof ayaa banaanbax ka dhan ah xisbiga talada haya ka dhigayay caasimada Tunis iyo magaalooyin kale, iyagoo ku qeylinayay “banneeya meesha!”, Waxayna ku baaqayeen in baarlamaanka la kala diro.
Ciidamada amaanka ayaa xiray baarlamaanka iyo waddooyinka ku xeeran bartamaha Bourguiba, oo ah xarun saldhig u ahayd mudaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda intii lagu gudajiray kacdoonkii Tunisia ee sanadkii 2011. Dibadbaxayaasha magaalada Tunis
Booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku riday dibadbaxayaasha waxayna xireen dhowr qof, iyadoo iska hor imaadyo ay ka bilowdeen magaalooyin kale oo dhowr ah.
Dibadbaxayaasha ayaa xoog ku galay xafiisyada xisbiga talada haya ee Ennahdha, iyagoo jajabiyay kumbuyuutarro isla markaana dab qabadsiiyay xaruntiisa deegaanka ee Touzeur.
Xisbiga ayaa cambaareeyay weerarka, isagoo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen “kooxaha dambiilayaasha ah” ee isku dayaya inay “abuuraan fowdo iyo burbur”.
Madaxweyne Saied wuxuu wacad ku maray inuu tallaabo military kaga jawaabi doono rabshado kale oo dheeraad ah.
“Waxaan uga digayaa qof kasta oo ku fikira in uu hub adeegsado… iyo qofkii xabbad ridana, ciidamada qalabka sida ayaa ku jawaabi doona rasaas,” ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in dastuurka uu u ogolaanayo inuu kala diro baarlamaanka hadii ay jirto “khatar soo food leh”.
Laakiin afhayeenka baarlamaanka Tuunis Rached Ghannouchi ayaa madaxweynaha ku eedeeyay in uu wado “afgambi ka dhan ah isbadalka iyo dastuurka”.
“Waxaan u aragnaa hay’adaha inay wali taagan yihiin, taageerayaasha xisbiga Ennahda iyo shacabka Tunisia waxay difaaci doonaan isbadalka,” Mr Ghannouchi, hogaamiyaha xisbiga Ennahda, ayaa sidaasi u sheegay wakaalada wararka ee Reuters.
Toban sano ka hor, kacaankii Tuniisiya wuxuu horseeday dimuqraadiyad, wuxuuna kiciyay kacdoonkii Gugii Carabta ee ka curtay dalal badan.
Laakiin rajadii laga qabay in isbadalkaasi uu horseedo shaqooyin iyo fursado badan ayaa lagu hungoobay.
Toban sano kadib, Tunisia waxay la dagaallameysaa dhibaato dhaqaale oo qoto dheer iyo waxaana xaaladda uga sii daray dhibaatooyinka ka dhashay fayraska corona.
Kiisaska ayaa si aad ah kor ugu kacay todobaadyadii la soo dhaafay, taas oo cadaadis dheeri ah saareysa dhaqaalaha sii liicaya.
Ra’isul wasaare Hichem Mechichi ayaa shaqada ka ceyriyay wasiirka caafimaadka toddobaadkii la soo dhaafay, hase yeeshee tallaabadaasi ayaanan waxba ka baddalin carada dadka